Ndingazikrwela njani iitekisi okanye amagama kwiWhatsapp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 344
Ngaphandle kokufaka imiyalezo emininzi kwangoko ekhoyo kwiifowuni ezi-smart, akukho mathandabuzo ukuba i-whatsapp kwaye iya kuba yiyo esetyenziswa kunye nesicelo esithandwayo ngalo lonke ixesha.
Nangona abanye abasebenzisi benengxaki ezithile kwimigaqo-nkqubo emitsha yabucala, inyani kukuba esi sicelo siyaqhubeka nokuzisa isimanga kubasebenzisi baso. Uhlaziyo ngalunye olunikezelwayo kuthi, sinako ukwenza njalo sebenzisa umsebenzi obukade ulahlekile.
Phakathi kwayo yonke le misebenzi, sifuna ukuqaqambisa nokukhankanya into ethile enokuba luncedo kakhulu nanini na usebenza neli nethiwekhi. Ke, namhlanje siza kukukhankanya kunye nendlela unokukrwelela isicatshulwa okanye amagama yomdla wakho kuyo nayiphi na incoko onayo kwesi sicelo.
Ukukrwela umgca onje ku-whatsapp
Sifuna ukuba uqonde into kwaye ayizukukwazi kuphela krwelela amagama athile, kodwa ungayenza ngezivakalisi kwaye ugqibezele imihlathi. Kananjalo, ukuba uyakwazi ukusebenzisa lo msebenzi mncinci ngokuchanekileyo, uya kuba nakho ukukrwela umgca ngaphantsi kwezivakalisi kumhlathi.
Ukuze usebenzise olu phawu lwesimbo sokubhaliweyo, kuya kufuneka usebenzise olu phawu "~" lulandelayo. Ngoku, malunga nendlela yosetyenziso, kuya kufuneka uyenze ngolu hlobo lulandelayo:
Kufuneka uyisebenzise ekuqaleni nasekupheleni kwelizwi ngaphandle kokushiya zizithuba phakathi kwegama kunye nesimboli. Oko kukuthi "~
Unokuyisebenzisa xa ukrwelela isivakalisi esipheleleyo. Oko kukuthi "~ Lo mbhalo uwhatsapp kufuneka ubonakale ugqityiwe okanye ukrwelelwe ~".
Okokugqibela, unokwazi ukukrwela umgca phantsi kwemihlathi yonke. Indlela ekufuneka uyiphumeze ngayo iyafana ncam naleyo yangaphambili.
Ngaba yiyo yonke le misebenzi yokubhaliweyo ikhoyo ngoku kuWhatsApp?
Kwithamsanqa lakho okanye kwimfuneko, ayisiyiyo kuphela into enayo le nto unayo umyalezo wangoko nangoko. Nangona ezi ntlobo zemisebenzi zilinganiselwe, inyani kukuba unolunye ukhetho onokukhetha kulo. Nganye inokwenziwa ngokwahlukeneyo okanye ngokudibeneyo.
Oko sithetha kona kukuba, ukongeza kwi amandla okwahlula iitekisi okanye amagamaUnethuba lokubeka ezi ngqindilili, ngoonobumba abakhethiweyo okanye ukhethe ifomathi ye-monospace ukuze ukwazi ukusebenzisa nganye yezi zinto zikhethekileyo ze-whatsapp, kuya kufuneka:
Amagama abhalwe ngqindilili
Ukuze ukwazi ukubeka amagama, izivakalisi okanye imihlathi iphela ngokungqindilili, sebenzisa nje i-asterisk ekuqaleni nasekupheleni kwayo nganye kwezi. Umzekelo: "* Lo mbhalo kufuneka ubonakale ubhalwe ngqindilili *"
Kule ndlela, kufuneka usebenzise i uphawu lwangaphantsi kwisivakalisi ngasinye, igama okanye umhlathi. Isimboli esetyenziswa yi "_Iursive words_".
Amagama akwifomathi yemonospace
Le fomathi okanye incinci, kuba ikuvumela ukuba ube neetekisi ezifanayo kakhulu nezo zifunyenwe xa usebenzisa oomatshini bokuchwetheza. Ukuze ukwazi ukuyisebenzisa, kuya kufuneka uphumeze ii-accents ezi-3 ekuqaleni nasekupheleni njengakwimeko zangaphambili.
1 Ukukrwela umgca onje ku-whatsapp
2 Ngaba yiyo yonke le misebenzi yokubhaliweyo ikhoyo ngoku kuWhatsApp?
2.1 Amagama abhalwe ngqindilili
2.2 Amagama akekeleyo
2.3 Amagama akwifomathi yemonospace
Ungarhumela njani kwisitishi seTwitch?